ICAO waxay iftiiminaysaa soo jeedinta Qadar ee ah inay maamusho hawadeeda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Qadar » ICAO waxay toos u iftiimisay soo jeedintii Qatar ee ahayd inay maamusho hawadeeda
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
ICAO waxay toos u iftiimisay soo jeedintii Qatar ee ahayd inay maamusho hawadeeda
ICAO ayaa oggolaatay, mabda 'ahaan markii la aasaasay Gobolka Macluumaadka Duulimaadka Doha (FIR) iyo Gobolka Badbaadinta iyo Badbaadinta Doha (SRR).
Qadar in ay hawadeeda ka samaysato Gobolkeeda Xogta Duulimaadka.
Qadar in ay ka baxdo heshiis ay la saxiixatay Baxreyn, kaas oo ay hoostagtay adeegyadeeda hagista hawada.
Soo jeedintani waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah xuquuqda madaxbanaanida ee Dawladda Qadar.
Qatar ayaa maanta ku dhawaaqday in Qaramada Midoobay Ururka Duulista Rayidka ee Caalamiga ah (ICAO) ayaa oggolaansho hordhac ah siiyay soo jeedinta waddanka ee ah inay maamusho hawadeeda, bilo kadib markii ay xallisay khilaaf u dhexeeya dalalka deriska ah ee Khaliijka.
Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta Qadar, hay'adda Qaramada Midoobay ayaa oggolaansho ka siisay 'mabda' ahaan in Qatar ay ka samaysato hawadeeda Hawada Macluumaadka Duulimaadka (FIR).
Go’aanka ICAO ayaa jawaab u ahaa codsi ka yimid Qadar oo ahaa inay ka baxdo heshiis ay la saxiixatay dalka ay jaarka yihiin ee Baxreyn ee Khaliijka, kaas oo ay hoostagtay adeegyadeeda hagista hawada.
Khilaaf muddo saddex sano ah soo jiitamayay oo ay la galeen koox ka mid ah waddamada Khaliijka ee dariska la ah oo uu hoggaaminayo Sacuudi Carabiya ayaa iftiimiyay khaladaadka ku jira heshiiska, kaas oo Qatar ka dhigay mid gebi ahaanba ku tiirsan helitaanka marin hawo oo ay maamulaan dalal kale.
ICAO “waxay isku raacday, mabda’ ahaan… iyadoo la aasaasayo Gobolka Macluumaadka Duulimaadka Doha (FIR) iyo Doha Goobidda iyo Badbaadinta Doha (SRR) ”wada -hadal bishii hore, ayay wasaaradda gaadiidka iyo isgaarsiinta Qatar ku sheegtay bayaan.
Waxay ku dari doontaa “hawada sare ee Qadar iyo, si kor loogu qaado badbaadada iyo hufnaanta hawada gobolka, hawada kale ee isku xiran ee ka sarreysa badda weyn”, ayay raacisay.
Soo jeedinta Qadar ayaa sidoo kale daboolay “damaceeda ah inay ka baxdo nidaamka hadda jira ee ay u wakiishay Baxrayn bixinta adeegyada hawo -mareenka ee dhulkeeda madaxbannaan”.
“Soo jeedintani waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah xuquuqda madaxbanaanida ee Qadar waxayna muujineysaa maalgashiga ballaaran ee ay Qatar ku samaysay si ay u horumariso nidaamkeeda hagista hawada,” ayuu yiri Wasiirka Gaadiidka Qatar Jassim Al-Sulaiti.